ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်း 20 – ဧဝံဂေလိတရားမှတ်တမ်း ဖြောင့်ဖြောင့်သတ်မှတ်ခြင်း- ယေရှုခရစ်၏ဗျာဒိတ်တော်
ေမ ၂၀၊​ ၂၀၂၂ မတ်လ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၉ အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး 20 အတွက် ရှေ့ဦးစွာ စကားစပ်ကြောင်းကို အတိုချုံးပြီး တည့်မတ်ကြပါစို့။
ပထမ၊ စောစောက ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၂၊ ပုဂံဘာသာ၊ အနီရောင် နဂါးရုပ် ရောမအင်ပါယာအောက်တွင် ပွင့်လင်းသော ပုဂံဘာသာတရားများကို ကိုယ်စားပြုသည့် ဘုရားကျောင်းကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ကြောင်း ပြသထားသည်။
ထို့နောက်၊ ရိုမန်ကက်သလစ်သားရဲကို ဗျာဒိတ် ၁၃ တွင် ပြထားသည်။ခရစ်ယာန်များကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်း၊
ထိုအခါ သားရဲနောက်၊ သိုးသငယ်နှင့်တူသော သားရဲကို ကျဆုံးသော ပရိုတက်စတင့် ဘုရားကျောင်းများ၏ ပုံစံဖြင့် ပြသထားသည်။. ဤပရောဖက်အတုအယောင်သားရဲသည် နောက်ပိုင်းတွင် သားရဲကိုကိုယ်စားပြုသည့်ပုံတစ်ခုကို ဖန်တီးသည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၇ ၏နောက်ဆုံးသားရဲသည် ecumenical World Council of Churches နှင့် United Nations တို့ဖြစ်သည်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၇ မှ ၁၉ တွင်မူကား၊ ဤသားရဲများအားလုံးကို ဖော်ထုတ်ပြီး ၎င်းတို့၏ သြဇာကို ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်သည်။, နှင့် ဗာဗုလုန်၏ ခရစ်ယာန်အတုအယောင်များ၏ လွှမ်းမိုးမှုမှာ လုံးဝပျက်စီးသွားပါသည်။.
သို့ဖြစ်၍ ယခုအခါတွင် သာသနာ့အချုပ်အနှောင်များ ပျက်ပြားသွားစေရန်၊ ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး 20 တွင်၊ ဧဝံဂေလိနေ့ပုံပြင်ကို ပြန်လည်ပြောပြသည်။လက်တွေ့တွင် ၎င်းသည် ဘာသာတရား၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် မကြာခဏလုပ်ဆောင်လေ့ရှိသော နဂါးနီစာတန်နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြောင်း လက်တွေ့တွင်ပြသခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ယခု အခန်း 20 တွင် ဗျာဒိတ်သတင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ယူထားပါသည်။ ဘာသာတရား၏ “ခရစ်ယာန်ဝတ်လုံများ” အတုအားလုံးကို ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ဤအချက်တွင် ဖယ်ရှားလိုက်ကြောင်း သတိရပါ။
“အောက်ခြေမရှိသောတွင်း၏သော့နှင့် သံကြိုးကြီးတစ်ချောင်းကိုကိုင်လျက် ကောင်းကင်ကကောင်းကင်တမန်တစ်ပါး ဆင်းသက်လာသည်ကို ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရသည်။” ~ ဗျာဒိတ် ၂၀:၁
အခန်းကြီး 20 မတိုင်မီက ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် မတူညီသောနေရာသုံးမျိုးဖြင့် အောက်ခြေမရှိသောတွင်းကို ဖော်ထုတ်ထားသည်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၉ တွင် – ကျဆုံးသောကြယ် (ကျဆုံးသောကောင်းကင်တမန်/တမန်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် သို့မဟုတ် လျှောကျနေသောဧဝံဂေလိတရားဓမ္မအမှု) တွင် အောက်ခြေမရှိသောတွင်းကို “ဖွင့်” ရန်သော့ပါရှိသည်။. သော့သည် လှည့်ဖြားသောကျဆုံးသောဓမ္မအမှုတစ်ခု၏လက်တွင် ထားရှိသည့် ဧဝံဂေလိတရားကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤဧဝံဂေလိတရားသော့ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းဖြင့်၊ သူတို့သည် အောက်ခြေမရှိသောတွင်းကိုဖွင့်ကာ အမှန်တရား၌ အခြေအမြစ်မရှိသော မုသားသတင်းစကားကို ထုတ်ပြန်ကြသည်။ "အောက်ခြေမရှိသောတွင်း" မက်ဆေ့ချ်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် အနက်ဆုံးသောတွင်းမှ အမှောင်ထုကို တိမ်တိုက်များ လွှတ်ထုတ်ခြင်းအဖြစ် ပြသထားသည်။ အောက်ခြေမရှိသောတွင်းသည် အုတ်မြစ်မရှိသောနေရာဖြစ်သည်။ အောက်ခြေမရှိသောတွင်းတစ်ခုပေါ်တွင် စစ်မှန်သောဝိညာဉ်ရေးအသက်တာကို သင်မတည်ဆောက်နိုင်ပါ။
ယေရှုခရစ်တစ်ဆူတည်းသောအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသည် သင့်အား အပြစ်အားလုံးမှ အပြည့်အဝကယ်နှုတ်မည်ဖြစ်ပြီး သန့်ရှင်းသောအသက်တာအတွက် တန်ခိုးပေးမည့် သေချာသောအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ အနက်ဆုံးသောတွင်းသတင်းက သခင်ယေရှုကို အခိုင်အမာဆိုထားသော်လည်း သင့်စိတ်ဝိညာဉ်၌ အောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ “အပြစ်ရှိသောခရစ်ယာန်” ဟုခေါ်သော “အပြစ်ရှိသောခရစ်ယာန်” အဖြစ် ထားရစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် ချည်နှောင်ထားသော နာကျင်ဖွယ်သတင်းစကားဖြစ်သော်လည်း သင့်အပြစ်များမှ သင့်ကို ဘယ်သောအခါမျှ မကယ်လွှတ်ပါ။
ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၉ တွင်၊ ဤညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့် မုသာဓမ္မက လူများကို ထိန်းချုပ်ကာ လှည့်ဖြားကာ “အဗဒ္ဒုန်” နှင့် “အာပေါလုယွန်” ဟူသောအမည်များဖြင့်လည်း ဖျက်ဆီးသူဟု တံဆိပ်တပ်ထားသည်။
“ထိုသူတို့၌ ဟေဗြဲဘာသာစကားဖြင့် Abaddon အမည်ရှိသော အောက်ခြေမရှိသောတွင်း၏ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်သည့် သူတို့အပေါ်တွင် ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးရှိသော်လည်း ဂရိဘာသာစကားတွင် အာပေါလုယွန်ဟူသောအမည်ကို ပေးထားသည်။ ~ ဗျာဒိတ် ၉:၁၁
နောက်တော့ ဗျာဒိတ် ၁၁:၇ နှင့် ဗျာဒိတ် ၁၇:၈ တွင် ဒုတိယသားရဲသည် အောက်ခြေမရှိသောတွင်းမှ တက်လာကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြသထားသည်။. ဤသားရဲသည် Apollyon/ဖျက်စီးသူ၏ တူညီသောဝိညာဉ်တော်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည် ပရိုတက်စတင့်ဘာသာ၏ ကွဲပြားသော ဂိုဏ်းခွဲများစွာမှတစ်ဆင့် “ခရစ်ယာန်ဘာသာ” အတုပုံစံတွင်းမှ ပေါ်ထွက်လာသော ပွင့်လင်းသော အယူမှားဝါဒ (ဘုရားပေါင်းစုံဘာသာတရားများ) ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
ခရစ်တော်သည် ဝိညာဉ်တစ်ဦးကို ကယ်တင်သောအခါတွင် ၎င်းတို့အား အသင်းတော်တစ်ခုတည်းတွင်သာ ပါဝင်စေသည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာက သွန်သင်သည်။ သူ၏အသင်းတော်တစ်ခုသည် သန့်ရှင်းပြီး စည်းလုံးညီညွတ်ပြီး နှုတ်ကပတ်တော်ကို နာခံလျက် နေထိုင်သည်။
Paganism သည် ကောင်းကင်သို့ရောက်ရန် ချာ့ခ်ျမျိုးစုံနှင့် နည်းလမ်းများစွာရှိကြောင်းနှင့် ကွဲပြားခြားနားသောအရာများစွာကို သင်ယုံကြည်နိုင်ကြောင်း သွန်သင်သည်။ Paganism သည် မတူညီသော ယုံကြည်ချက်အမျိုးမျိုးရှိသော အသင်းတော်များ၏ စုစည်းမှုကို လိုလားပြီး၊ လူများကို ရှုပ်ယှက်ခတ်ရန်နှင့် လှည့်ဖြားရန် အလိုရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ Paganism သည် သင့်အား ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအဖြစ် ခံယူလိုပြီး သင့်ဘ၀တွင် အပြစ်တရားများဖြင့် ဆက်လက်အသက်ရှင်နေစေလိုသည်။
အယူမှားဝါဒ၏ သတင်းစကားသည် ဧဝံဂေလိအမှန်တရား၌ အခြေအမြစ်မရှိသော အောက်ခြေမရှိသောတွင်းမှ ဆင်းသက်လာသည်။ မှားယွင်းသောယုံကြည်မှုစနစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးကာ မှားယွင်းသောယုံကြည်မှုစနစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးကာ အယူမှားဝါဒကို အမှန်တရားနှင့် ရောနှောနေသော မှားယွင်းသော “ခရစ်ယာန်” ဓမ္မအမှုဆောင်များမှတစ်ဆင့် ၎င်းကို ပြီးမြောက်စေသည်။
ယေရှုခရစ်နှင့် သူ၏ဧဝံဂေလိတရားသည် အသင်းတော်၏ စစ်မှန်သောအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပေတရုသည် ယေရှုကို ခရစ်တော်၊ လောက၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် သတ်မှတ်သောအခါ၊ ယေရှုသည် ခိုင်မာသောအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး၊ သူသည် သူ၏အသင်းတော်ကို တည်ဆောက်မည်ဟု သူ့ကိုယ်သူပြောခဲ့သည်။
“… ဒီကျောက်ပေါ်မှာ ငါ့ဘုရားကျောင်းကို ငါတည်ဆောက်မယ်။ ငရဲတံခါးတို့သည် အောင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။” ~ မဿဲ ၁၆:၁၈
“အကြောင်းမူကား၊ ယေရှုခရစ်တည်းဟူသော ချထားသောအုတ်မြစ်မှတပါး အဘယ်သူမျှ မချနိုင်။” ~ ၁ ကောရိန္သု ၃:၁၁
ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဂရုတစိုက်အသုံးပြုရန် စစ်မှန်သောသစ္စာရှိဓမ္မအမှုတစ်ခု လိုအပ်သည်။ ဘုရားသခင်ကို ဦးဆောင်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်၊ စစ်မှန်သောဓမ္မအမှုတစ်ခုသည် အယူမှားသောလိမ်ညာမှုများ၏ မှားယွင်းမှုများကို ချည်နှောင်ရန် ဧဝံဂေလိတရား၏သော့များကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် မှားယွင်းသောဓမ္မအမှုတစ်ခုကို ဝိညာဉ်ရေးအရ ချည်နှောင်နိုင်သည်။
ကောင်းကင်တမန်က စာတန်ကို အနှစ်တစ်ထောင် ဘယ်အချိန်မှာ ချည်နှောင်ခဲ့သလဲ။
ယေရှုက သူ၏ဓမ္မအမှုတွင် ဧဝံဂေလိတရား၏သော့များကို ချည်နှောင်ရန်နှင့် ဆုံးရှုံးရန် ပေးမည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
မူရင်းတွင် “ကောင်းကင်တမန်” ဟူသောစကားလုံးသည် ဘုရားသခင်ထံမှတမန်ကို ဆိုလိုသည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင်၊ ၎င်းသည် လူ့ဓမ္မအမှုတစ်ခုကို မကြာခဏကိုယ်စားပြုသည်။
“ထိုမြို့ရိုးကို တိုင်း၍ အချင်းတရာလေးဆယ်လေးတောင်၊ ~ ဗျာဒိတ် ၂၁:၁၇
“ထိုအရာများကို ငါယောဟန်မြင်၍ ကြား၏။ ငါသည် ကြား၍ မြင်သောအခါ၊ ဤအရာတို့ကို ပြတော်မူသော ကောင်းကင်တမန်၏ ခြေတော်ရှေ့မှာ ရှိခိုးခြင်းငှါ ပြပ်ဝပ်၏။ ထို​အ​ခါ သူ​က ငါ့​အား၊ သင်​တို့​သည် အ​မှု​ပြု​တော်​မ​မူ​ပါ​နှင့်၊ ငါ​သည် သင်​၏​လုပ်​ဖော်​ကိုင်​ဖက်​ဖြစ်​၍ သင်​၏​ညီ​အစ်​ကို​ပ​ရော​ဖက်​များ​ဖြစ်​၍ ဤ​ကျမ်း​စာ​ကို​စောင့်​ထိန်း​သော​သူ​တို့​လည်း​ဖြစ်​သည်​ဟု မိန့်​တော်​မူ​၏။ ~ ဗျာဒိတ် ၂၂:၈-၉
ထို့ကြောင့်၊ ၀ိညာဉ်ရေးရာဘာသာစကားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး 20 တွင် ဧဝံဂေလိတရား၏သော့ပါရှိသော (“ကောင်းကင်တမန်” ဟူသောစကားလုံးကိုအသုံးပြု၍ ဓမ္မအမှုတစ်ခု၏ရူပါရုံကို ပေးထားသည်။ ဤသော့ဖြင့် ၎င်းတို့သည် အယူမှားသော လိမ်လည်မှုများဖြင့် လုပ်ဆောင်သော စာတန်၏ မုသားတန်ခိုးများကို စုစည်းထားသည်။
“အောက်ခြေမရှိသောတွင်း၏သော့နှင့် သံကြိုးကြီးကိုကိုင်လျက် ကောင်းကင်ကကောင်းကင်တမန်တစ်ပါး ဆင်းသက်လာသည်ကို ငါမြင်၏။ မာရ်နတ်၊ စာတန်တည်းဟူသော မြွေဟောင်းကို ဖမ်း၍ အနှစ်တထောင် ချည်နှောင်၍ အောက်ဆုံးသောတွင်းထဲသို့ ချပစ်ပြီးလျှင် ချုပ်ထား၍ တံဆိပ်ခတ်ထားရမည်။ အနှစ်တစ်ထောင်မပြည့်မှီတိုင်အောင် လူမျိုးတို့ကို မလှည့်ဖြားကြနှင့်။ ထိုနောက်မှ အနည်းငယ်သောရာသီကို လွတ်စေရမည်။” ~ ဗျာဒိတ် ၂၀:၁-၃
သခင်ဘုရား၏ တမန်တော်များနှင့် တပည့်များအားဖြင့်၊ နောက်ဆုံးတွင် ဧဝံဂေလိတရားသည် လူမျိုးခြားများထံ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ၎င်းတို့သည် ပုဂံအယူဝါဒ၏ အင်အားစုများနှင့် ကြီးမားသော တိုက်ပွဲတစ်ခုတွင် လျင်မြန်စွာ တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဧဝံဂေလိတရားသည် အယူမှားသောမုသားများအတွက် ကွင်းဆက်တစ်ခုသဖွယ်ဖြစ်သည်၊ ဘုရားသခင်နှင့် ဘာသာတရားများ များပြားစွာဖြင့် လှည့်ဖြားရန် စာတန်၏ တန်ခိုးကို ချည်နှောင်ထားသည်။ ယင်းမတိုင်မီက၊ ဧဝံဂေလိသွားရောက်လည်ပတ်သည့်နိုင်ငံများသည် ဘုရားများစွာ၏စာတန်၏သတင်းစကားနှင့် ၎င်းတို့၏ပြိုင်ဘက်မတူသောဘုရားများထံ ယဇ်ပူဇော်ရန် နည်းလမ်းများစွာဖြင့် လှည့်စားခံခဲ့ရသည်။ သို့ရာတွင် ထိုမုသားများကို သမ္မာတရားက ထုပ်ပိုးထားပြီး ကျမ်းစာက “… သူ့ကို ချုပ်ထား၍ တပါးအမျိုးသားတို့ကို နောက်တဖန် မလှည့်ဖြားစေခြင်းငှာ တံဆိပ်ခတ်ထားလော့” ဟူ၍ ထိုနိုင်ငံရှိ လူများသည် အပြစ်များမှ ကယ်တင်ရန် လိုအပ်နေသေးသည်၊ သို့သော် ဤအနှစ် 1,000 ကာလအတွင်း ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းနှင့် ဘုရားသခင်၏လူတမျိုးတည်းသာ ရှိမည်ဟု နားလည်ခဲ့ကြသည်။ (ယနေ့၊ စာတန်သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်၊ လူများသည် ဘုရားသခင်နှင့် သူ၏တစ်ဆူတည်းသောလူမျိုးဖြစ်သော အသင်းတော်အကြောင်းကို အလွန်စိတ်ရှုပ်သွားကြသည်။)
ဧဝံဂေလိတရား၏ “ထက်မြက်သောဓား” နှင့် တိုက်ခိုက်ရန် ဤတန်ခိုးအာဏာကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်ပင် ပရောဖက်ပြုထားသည်။
“အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် မိမိလူတို့ကို နှစ်သက်တော်မူ၏။ သန့်ရှင်းသူတို့သည် ဘုန်းကြီး၍ ရွှင်လန်းကြစေ။ အိပ်ရာပေါ်မှာ ကြွေးကြော်ကြပါစေ။ ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်း၍၊ တပါးအမျိုးသားတို့၌ ဒဏ်ပေးခြင်း၊ မှူးမတ်တို့ကို သံကြိုးနှင့် ချည်နှောင်၍၊ သူတို့အပေါ်၌ စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းငှာ၊ ဤဂုဏ်အသရေသည် သူ၏သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ရှိကြ၏။ ထာဝရဘုရားကို ချီးမွမ်းကြလော့။” ~ ဆာလံ ၁၄၉:၄-၉
ထို့ကြောင့်၊ ဧဝံဂေလိတရားသည် Paganism ကိုတိုက်ခိုက်သောအခါတွင်၊ ဘုရားကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများ၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်၊ ခြောက်ရာစုမှစတင်၍ "အလယ်ခေတ်" ဟုလူသိများသောအနှစ်တစ်ထောင်ကြာ Paganism သည်အခြေအမြစ်မရှိသောတွင်းထဲသို့လုံးဝချည်နှောင်လာသည်။ အေဒီ 530 ဝန်းကျင်တွင် ပရိုတက်စတင့်အယူဝါဒနှင့် ဂိုဏ်းခွဲများ များပြားလာသည် (1530 ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင်) စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် (1530 ဝန်းကျင်) တွင် ပုဂံဘာသာ၏ ဝိညာဉ်သည် ဘုရားသခင်ထံရောက်ရှိရန် ဘာသာရေးနည်းလမ်းများစွာဖြင့်၊ နှင့် များစွာသောဘာသာတရား/အသင်းတော်များ ဘုရားကျောင်းအပေါ်သို့ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။ လူများ (အသင်းတော်နှင့် ဆက်စပ်နေသူများ)။
ပရိုတက်စတင့်ဂိုဏ်းမတည်ဆောက်မီတွင်၊ ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းနှင့် အယူဝါဒတစ်ခုတည်းကိုသာ သင်ကြားခွင့်ပြုသည့် စကြာဝဠာကက်သလစ်ချာ့ခ်ျအတွင်း၌ အယူဝါဒများနှင့် ဘုရားများ များပြားစွာ ပုန်းအောင်းခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် စာတန်သည် “ဘုရားသခင်တစ်ဆူ၊ အသင်းတော်တစ်ဆူ၊ အယူဝါဒတစ်ခု” ၏အကြောင်းအရာအတွင်း အရေခြုံမှုနှင့် မှားယွင်းသောအယူဝါဒများကို မြှင့်တင်ရန် အာရုံစိုက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေတွင်၊ ဗာဗုလုန်၏ဝိညာဉ်ရေးပြည်တန်ဆာဘ၀သည် မြင့်တက်လာပြီး စကြဝဠာကက်သလစ်ချာ့ချ်မှတစ်ဆင့် ကြီးကျယ်သောအာဏာရလာသည်။
အခု ဘယ်တော့လဲ။ ခရစ်ယာန်အတုအယောင်၊ ရိုမန်ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျပုံစံဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာကာ ခရစ်ယာန်စစ်များကိုလည်း နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခဲ့သည်။. စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းရာတွင်၊ ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျသည် ခရစ်ယာန်စစ်များကို အဆိုးရွားဆုံးရာဇ၀တ်ကောင်များအဖြစ် စွပ်စွဲကာ တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
ဤ ဗျာဒိတ်သတင်းစကားသည် မှတ်တမ်းကို ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း သတ်မှတ်ရန် ပေးထားသည်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့် ဆရာတော်များ အုပ်စိုးစဉ်ကာလအတွင်း အကျဉ်းချ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသော ခရစ်ယာန်များသည် ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သော လူများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ မှတ်တမ်းသည် ၎င်းတို့အပေါ် ချမှတ်ထားသည့် မုသားများနှင့် ဆင်းရဲဒုက္ခများကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း သက်သေပြရန် လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင် “ခရစ်ယာန်” ဟုဆိုသော ကြောင်သူတော်များ၏လက်၌ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကို ခံရပ်ခဲ့ရသည့် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်အားလုံးအပေါ် သက်ရောက်သည့် ဆင်းရဲဒုက္ခများနှင့်လည်း ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤဆင်းရဲဒုက္ခခံခရစ်ယာန်များသည် အမှန်တကယ်ပင် အောင်နိုင်သူများနှင့် ဘုရင်များဖြစ်သည်။
“အပြစ်တင်သောသူကား မည်သူနည်း။ အသေခံတော်မူသော ခရစ်တော်ကား၊ တဖန်ထမြောက်တော်မူသော၊ ငါတို့အတွက် ဆုတောင်းပေးတော်မူသော ဘုရားသခင်၏ လက်ျာတော်ဘက်၌ပင် ရှိတော်မူ၏။ ခရစ်တော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ငါတို့ကို အဘယ်သူ ခွဲထုတ်မည်နည်း။ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်း၊ အစာခေါင်းပါးခြင်း၊ အဝတ်အချည်းစည်းရှိခြင်း၊ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ကိုယ်တော်အတွက်ကြောင့် အကျွန်ုပ်တို့သည် တနေ့လုံး အသေသတ်ခြင်းကို ခံရပါ၏။ သတ်ခြင်းအတွက် ငါတို့သည် သိုးကဲ့သို့ မှတ်ကြပြီ။ မဟုတ်ပါဘဲ၊ ဤအရာများအားလုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်တော်မူသောသူအားဖြင့် အောင်နိုင်သူများထက် သာ၍များပါသည်။ အကြောင်းမူကား၊ သေခြင်း၊ အသက်မရှိ၊ သြဇာအာဏာ၊ပစ္စုပ္ပန်ရှိသောအရာများ၊ နောင်လာမည့်အရာများ၊ အမြင့်၊ အနက်၊ အခြားမည်သည့်သတ္တဝါမဆို၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၌ရှိတော်မူသော ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ငါတို့ကို ခွဲထုတ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။" ~ ရောမ ၈:၃၄-၃၉
ယေရှုခရစ်၏ဗျာဒိတ်တော်မှသာလျှင် လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ စိတ်နှလုံးအတွင်း စစ်မှန်သောဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေမှန်ကို မြင်တွေ့နိုင်စေရန် စစ်မှန်သောအလင်းကိုပြသနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအလင်းကိုပြသောအခါ၊ လူတိုင်းသည် စောင့်ဆိုင်းနေချိန်နှင့် ပေါ်ထွန်းလာချိန်အတွင်း သူ၏အကူအညီအတွက် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းနိုင်သည်။
“ထို့ကြောင့်၊ မှောင်မိုက်၌ ဝှက်ထားသောအရာတို့ကို လင်းစေ၍၊ စိတ်နှလုံးအကြံအစည်များကို ထင်ရှားစေမည့် ထာဝရဘုရား ကြွလာတော်မူသည်တိုင်အောင်၊ အချိန်မတိုင်မှီ အဘယ်အမှုကိုမျှ မစီရင်ဘဲ၊ ထို့နောက်တွင်၊ လူသားတိုင်း ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းရလိမ့်မည်။” ~ ၁ ကောရိန္သု ၄:၅
ထို့ကြောင့် ယခု အခန်းကြီး 20 မတိုင်မီတွင် ဗျာဒိတ်ကျမ်းစာက ဖော်ပြသည်-
စာတန်သည် စစ်မှန်သောချာ့ခ်ျကို တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် ပုဂံဘာသာ၏နဂါးသားရဲစွမ်းအားများကို အသုံးပြုခဲ့သည် (ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၂ တွင်ဖော်ပြထားသည်)။
ထို့နောက် စာတန်သည် သူ၏တန်ခိုးကို ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၃ ၏ ရိုမန်ကက်သလစ်သားရဲထံ လွှဲပြောင်းပေးကာ ဤသားရဲတန်ခိုးဖြင့် သူသည် ခရစ်ယာန်စစ်များစွာကို ညှဉ်းဆဲသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်း (နှစ်ပေါင်း ၁,၀၀၀ ခန့်) စာတန်၏လှည့်ဖြားမှုသည် ဘာသာတရားများစွာနှင့် ဘုရားများစွာကို “အောက်ခြေမရှိသောတွင်း” တွင် ချုပ်နှောင်ထားခဲ့သည်။
ဤအနှစ်တစ်ထောင်ကာလ (အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် အေဒီ ၅၃၀ မှ အေဒီ ၁၅၃၀ ) အတွင်း ခရစ်ယာန်စစ်များသည် ချာ့ခ်ျဟု ဆိုထားသည့်အရာကြောင့် ပြင်းထန်စွာ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရသည်။ သို့သော် ဤအချိန်အတောအတွင်း ဘုရားသခင်၏လူစစ်များသည် ၎င်းတို့၏ဝိညာဉ်နှင့် ယေရှုနှင့် ၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးကို ဖောက်ပြန်ရန်ကြိုးစားသော ရိုမန်ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျ၏ မှားယွင်းသောသွန်သင်ချက်များနှင့် ယုံကြည်ချက်များကို လက်မခံခဲ့ကြပေ။ ထို့ကြောင့် ရိုမန်ကက်သလစ် သားရဲဘာသာကို မကိုးကွယ်ခဲ့ကြပေ။ နဖူး၌ တိရစ္ဆာန်၏ အမှတ်အသားကို လက်မခံကြကုန်။ (လက်ယာလက်၌ ရှိသော အမှတ်အသား) ကို လက်မခံကြ။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် (သားရဲရုပ်ပုံ) ကို ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပုံစံတူ ပရိုတက်စတင့်သားရဲဘာသာရေးပုံစံဖန်တီးရန် မကြိုးစားခဲ့ပေ။
ထို့ကြောင့် ယခု ဗျာဒိတ်သတင်းသည် သားရဲမှဖုံးကွယ်ထားသည့် “ခရစ်ယာန်” အတုအယောင်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်၊ ထို့ကြောင့် ယခု ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး 20 တွင် ဘုရင်အစစ်အမှန်များသည် မည်သူဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိမြင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ရိုမန်ကက်သလစ် ဘုရားကျောင်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မဟုတ်ဘူး ဘုရင်! သို့သော် ကက်သလစ်အသင်းတော်က နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခဲ့သည့် ခရစ်ယာန်စစ်များသာဖြစ်သည်။ အတိတ်ကာလများ (ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၆ တွင်ဖော်ပြထားသည်)၊ ဤညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသောခရစ်ယာန်များသည် ၎င်းတို့အား အပြစ်ပေးကာ “ခရစ်ယာန်အတုအယောင်များ” ဖြင့် ၎င်းတို့အပေါ်ပြုသောအမှားကို ဖော်ထုတ်ရန် သခင်ဘုရားထံ အော်ဟစ်ခဲ့ကြသည်။
“ပဉ္စမတံဆိပ်ကိုဖွင့်သောအခါ၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့် အသေခံခြင်း နှင့် သက်သေခံခြင်းအတွက် ယဇ်ပလ္လင်အောက်တွင် ငါမြင်ခဲ့ရသည်– “အို၊ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး၊ အို၊ သန့်ရှင်း၍ မှန်သောအရှင်၊ ကိုယ်တော်သည် မြေကြီးပေါ်မှာနေသော သူတို့အပေါ်၌ အကျွန်ုပ်တို့၏ အသွေးကို စစ်ကြောစီရင်တော်မမူသလော။ ဖြူသောသင်္ကန်းကို အသီးသီး ပေးကြ၏။ သူတို့သည် အချိန်အနည်းငယ်မျှ အနားယူရမည်ဟု သူတို့အား မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ သူတို့သည် အသတ်ခံရသော သူတို့၏ အပေါင်းအဖော်များနှင့် သူတို့၏ညီအစ်ကိုများ မပြည့်စုံမှီတိုင်အောင်၊ ~ ဗျာဒိတ် ၆:၉-၁၁
ယခု ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး 20 တွင် အားလုံးပြည့်စုံသွားပါပြီ။ ပရိုတက်စတင့်အတုအယောင်ပရောဖက်နှင့် ပြည့်တန်ဆာဗာဗုလုန်အပါအဝင် သားရဲ၏ဝိညာဉ်ရေးစွမ်းအားများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် စာတန်နှင့် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များကြားတွင် အမြဲတမ်းတိုက်ပွဲတစ်ခုသာ ဖြစ်သည်ကို ယခု ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နေရပါသည်။. “ခရစ်ယာန်အတုအယောင်များ” ၏လက်တွင် ခေတ်အဆက် ဆက်ခံစားခဲ့ရသော ဤခရစ်ယာန်စစ်များသည် အမှန်တကယ်ပင် စစ်မှန်သောအသင်းတော်ဖြစ်သည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဒံယေလသည် ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး 20 ၏ အလားတူရူပါရုံကိုလည်း ပရောဖက်ပြုစွာ မြင်ခဲ့သည်။
“ထိုဦးချိုသည် သန့်ရှင်းသူတို့နှင့် စစ်တိုက်၍ နိုင်၏။ ရှေးကာလရောက်သည်တိုင်အောင်၊ အမြင့်ဆုံးသော ဘုရား၏ သန့်ရှင်းသူတို့အား တရားစီရင်ခြင်းကို ခံရ၍၊ သန့်ရှင်းသူတို့သည် နိုင်ငံတော်ကို သိမ်းယူသောအချိန်ရောက်၏။ (ဒံယေလ ၇:၂၁-၂၂)
နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရသူများသည် စစ်မှန်သောနိုင်ငံတော်သားများဖြစ်ကြောင်းကို ယေရှုက သူ၏စစ်မှန်သော သူတော်စင်များကိုယ်စား ထုတ်ဖော်ပြီး တရားစီရင်မည့်အချိန်ရောက်လာပြီ။ ဘယ်သူကမှန်တယ်၊ ဘယ်သူကအတုလဲဆိုတာ ယေရှု ထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်။ ယခုတွင် ကက်သလစ်ဘာသာ၏ အတုအယောင်နှင့် ကျဆုံးသော ပရိုတက်စတင့်အယူဝါဒကို ပေါ်လွင်စေခဲ့သည်၊ ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး 20 တွင် ၎င်းသည် စာတန်နှင့် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရသော ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သောလူတို့ကြား အမြဲတမ်း တိုက်ပွဲတစ်ခုမျှသာဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါသည်။ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရသောခရစ်ယာန်များသည် ဤအချိန်အတွင်း ခရစ်တော်နှင့်အတူ စိုးစံခဲ့သော စစ်မှန်သောဘုရင်များဖြစ်သည်။
လွန်ကျူးခြင်း နှင့် အပြစ်များ ကြောင့် သေဆုံးသွားသော ကျန်သူများ (ဤ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်း ခံရသော အသင်းတော် ပြင်ပ မှ သူများ ) သည် အနှစ် တစ်ထောင် ပြီးသည် အထိ ဧဝံဂေလိ တရား ကို နောင်တ နှင့် ကယ်တင်ခြင်း ကို ရှာမတွေ့ ခဲ့ပေ။
“အနှစ်တထောင်မကုန်မှီတိုင်အောင်၊ ဒါက ပထမဆုံး ထမြောက်ခြင်းပဲ။” ~ဗျာဒိတ် ၂၀:၅
ဗျာဒိတ် ၂၀:၅ တွင် “ပထမထမြောက်ခြင်း” က ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
အသက်တာ၌ အပြစ်သည် လူတစ်ဦးကို ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင် အသက်ရှင်နေသေးသည့်တိုင် သူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်တွင် သေဆုံးစေပါသည်။
ဒုစရိုက်အပြစ်တို့၌ သေလွန်သောသူ၊ ရှေးကာလ၌ သင်တို့သည် ဤလောက၏လမ်းစဉ်အတိုင်း ကျင့်ကြကုန်သော အာကာသ တန်ခိုးရှင်မင်း၏ အလိုအရ၊ မနာခံခြင်း၏ နောက်၌ ယခုကျင့်သော ဝိညာဉ်သည် ရှေးကာလ၌ ဖြစ်ကုန်သော ကာမဂုဏ်တို့၌ ကျင်လည်ကြကုန်၏။ ဇာတိပကတိနှင့် စိတ်၏အလိုဆန္ဒကို ပြည့်စုံစေ၍၊ အမျက်ဒေါသ၏ သားသမီးတို့သည် ပကတိအားဖြင့် ဖြစ်ကြ၏။ ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသော မဟာကရုဏာတော်ကြောင့်၊ ငါတို့သည် အပြစ်၌သေလွန်သောအခါ၌ပင် ခရစ်တော်နှင့်အတူ ငါတို့ကို ရှင်စေတော်မူပြီ။ ခရစ်တော်ယေရှု၌ ကောင်းကင်ဘုံ၌ အတူထိုင်ကြလော့။” ~ ဧဖက် ၂:၁-၆
ထို့ကြောင့် ယေရှုခရစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ခွင့်လွှတ်ပြီး ကယ်တင်သောအခါ၊ အပြစ်တရား၏သေခြင်းမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ရှင်ပြန်ထမြောက်စေကာ အပြစ်မှလွတ်သော အသက်တာသစ်သို့ ရှင်ပြန်ထမြောက်စေပါသည်။
“ထိုကြောင့် လူမည်သည်ကား၊ ခရစ်တော်၌ရှိလျှင်၊ အသစ်သော သတ္တဝါဖြစ်တော်မူ၏။ ဟောင်းသောအရာတို့သည် ကွယ်ပျောက်၍၊ ရှုလော့၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် အသစ်ဖြစ်ကြပြီ။” ~ ၂ ကောရိန္သု ၅:၁၇
ထို့ကြောင့် ပထမသေခြင်းသည် အပြစ်ပြုသောအခါ ဝိညာဉ်၏သေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝအား ဥယျာဉ်တွင် အမိန့်တော်မနာခံသည့်နေ့၌ သေရမည်ဟု မိန့်ကြားခဲ့သည်။
“ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင် မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဥယျာဉ်၌ရှိသမျှသောအပင်ကို လွတ်လပ်စွာစားနိုင်သည်– “အကောင်းအဆိုးကိုသိသောအပင်၏အပင်ကိုမူကား မစားရ။ အကြောင်းမူကား၊ သင်စားသောနေ့၌၊ ​သေချာ​ပေါက်သေမယ်​။" ~ ကမ္ဘာဦး ၂:၁၆-၁၇
ထို့ကြောင့် ယခုအားလုံးသည် အပြစ်ရှိသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်၏အသက်တာမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ရန်၊ အပြစ်အားလုံးမှ လွတ်သောဘဝသစ်သို့ ရှင်ပြန်ထမြောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ “ပထမ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း” ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်တရားကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ဆီသို့ ပထမဆုံးသေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးသည်နှင့် ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒုတိယနှင့် နောက်ဆုံးသေခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်ပြီဖြစ်သည်- ငရဲ၌ ထာဝရပျောက်ဆုံးလျက်ရှိသော၊
“ပဌမထမြောက်ခြင်း၌ပါဝင်သောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၍ သန့်ရှင်းတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ထိုသို့သောဒုတိယသေခြင်း၌ တန်ခိုးမရှိသော်လည်း၊ ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့်ခရစ်တော်၏ယဇ်ပုရောဟိတ်များဖြစ်ကြ၍ အနှစ်တစ်ထောင်စိုးစံရကြလိမ့်မည်။” ~ ဗျာဒိတ် ၂၀:၆
ခရစ်ယာန်အများစုမဟုတ်ပါက ဤအနှစ်တစ်ထောင်အတွင်း နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအောက်တွင် သေဆုံးခဲ့ကြသော်လည်း၊ ယေရှုခရစ်အားဖြင့် အပြစ်မှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်၊ ဒုတိယသေခြင်းမှာ သူတို့ကို အပြစ်စီရင်ရန် တန်ခိုးမရှိပေ။
“အို သေမင်း၊ မင်းရဲ့အဆိပ်က ဘယ်မှာလဲ။ အိုသင်္ချိုင်း၊ သင်၏အောင်ပွဲသည် အဘယ်မှာရှိသနည်း။ သေခြင်း၏ ဒဏ်ချက်သည် အပြစ်ဖြစ်၏။ ဒုစရိုက်၏အစွမ်းသတ္တိသည် ပညတ်တရားဖြစ်၏။ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါတို့ကိုအောင်နိုင်စေတော်မူသော ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း။” ~ ၁ ကောရိန္သု ၁၅:၅၅-၅၇
ထို့အတွက်ကြောင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၂၀ တွင် ဤသို့ဖော်ပြထားသည်–
“ထိုအခါ ပလ္လင်တော်တို့ကို ငါမြင်၍ သူတို့အပေါ်၌ ထိုင်၍ တရားစီရင်ခြင်းကို ခံရသောအခါ၊ ယေရှု၏သက်သေအတွက်၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်၊ သားရဲကို မကိုးကွယ်ဘဲ ခေါင်းဖြတ်ခံရသော သူတို့၏ ဝိညာဉ်များကို ငါမြင်ရ၏။ သူ၏ရုပ်တုကိုလည်းကောင်း၊ နဖူးပေါ်၌လည်းကောင်း၊ ခရစ်တော်နှင့်အတူ အနှစ်တထောင် အသက်ရှင်၍ စိုးစံကြ၏။ အနှစ်တစ်ထောင်မကုန်မှီတိုင်အောင်၊ ဒါက ပထမဆုံး ထမြောက်ခြင်းပဲ။” ~ ဗျာဒိတ် ၂၀:၄-၅
အနှစ်တစ်ထောင်အတွင်းမှာ ခရစ်ယာန်စစ်အများစုဟာ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်။ ခရစ်တော်အတွက် ဖိအားကို အလျှော့မပေးဘဲ အနစ်နာခံဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဝိညာဉ်ထဲမှာ သေဆုံးနေဆဲပါပဲ။ ခရစ်တော်အတွက်အသေခံသူများသည် “ခရစ်တော်နှင့်အတူ အနှစ်တစ်ထောင်နေထိုင်၍ စိုးစံ” ကြသည်။ သို့သော် ကျန်သူများသည် အသက်ရှင်စဉ်တွင်ပင် ဝိညာဉ်ရေးအရ သေဆုံးသွားကြသည်။ ဤညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု ရပ်တန့်သွားသည့်တိုင်အောင် အခြားသူများလည်း ဧဝံဂေလိတရားအတွက် ၎င်းတို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသက်ကို ဆုံးရှုံးစရာမလိုဘဲ ကယ်တင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းက ဤသို့ဆိုသည်– “အနှစ်တစ်ထောင်မကုန်မှီတိုင်အောင်၊ ဒါက ပထမဆုံး ထမြောက်ခြင်းပဲ။” အနှစ်တစ်ထောင်ကြာပြီးနောက်၊ သူတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်ကို မလိုအပ်ဘဲ ပထမဆုံးရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ခံစားနိုင်ကြသည်။ သို့သော် အနှစ်တစ်ထောင်အတွင်း၊ အပြစ်၌အသက်ရှင်နေသူများသည် အပြစ်၌ဆက်လက်နေထိုင်ပြီး ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျ၏မှားယွင်းသောသွန်သင်ချက်များကို လိုက်နာကြသောကြောင့် ဝိညာဉ်ရေးအရသေဆုံးသွားကြသည်။
“အပျော်သဘောဖြင့် အသက်ရှင်သောမိန်းမမူကား၊ ~ ၁ တိမောသေ ၅:၆
ဤကျမ်းချက်၏ဝိညာဉ်ရေးရောင်ပြန်ဟပ်မှုတွင်- ထိုနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်အတွင်း၊ သစ္စာမဲ့အမျိုးသမီး (ကက်သလစ်အသင်းတော်) ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောသူများသည် ကြောင်သူတော်၏အပျော်အပါး၌နေထိုင်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသက်ရှင်စဉ်တွင် ဝိညာဉ်ရေးအရ သေဆုံးခဲ့ကြသည်။
ထို့ကြောင့် ဤ ကက်သလစ် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှု အနှစ်တစ်ထောင် ပြီးသည့်နောက်၊ ပြိုလဲနေသော ပရိုတက်စတင့် ဂိုဏ်းခွဲများစွာ၏ နောက်တစ်ကြိမ် ရောက်လာသည်။ ဘုရားသခင်တွင် အသင်းတော်တစ်ခုသာရှိသည်။ ဘုရား၏လူမျိုးကို ဂိုဏ်းခွဲများနှင့် မှားယွင်းသောအယူဝါဒများအဖြစ် ပိုင်းခြားခြင်းသည် ဘုရားသခင်အပေါ် ကြီးမားသောလှည့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဘုရားများစွာနှင့် ဘာသာတရားများစွာကို လှည့်ဖြားခြင်းသို့ ပြန်သွားရန်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာ ကက်သလစ် အုပ်ချုပ်မှု အနှစ်တစ်ထောင် အပြီးမှာ အတိအကျ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်လွန်သောအခါ စာတန်သည် မိမိအကျဉ်းမှ လွတ်မြောက်ပြီး မြေကြီးလေးပုံတစ်ပုံတွင်ရှိသော ဂေါဂနှင့် မာဂေါဂတို့ကို စစ်တိုက်ခြင်းငှာ စုဝေးစေခြင်းငှာ လှည့်ဖြားခြင်းငှာ ထွက်သွားလိမ့်မည်။ သမုဒ္ဒရာသဲလုံးကဲ့သို့ ဖြစ်တော်မူ၏။” ~ ဗျာဒိတ် ၂၀:၇-၈
ထို့ကြောင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ပရိုတက်စတင့် ဂိုဏ်းခွဲများ ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အဓိက လှည့်စားသော အယူဝါဒများ ရှိလာခဲ့ပြီး ဧဝံဂေလိတရား၏ ဖြူစင်သော အမှန်တရားကို ဆန့်ကျင်ရန် အတုအယောင် ပရောဖက်များစွာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ ပရောဖက်ပြုချက်သည်လည်း အပြစ်၌ အသက်ရှင်ဆဲဖြစ်သော ဆိုးညစ်သော လူဆိုးများနှင့် ဝိညာဉ်ရေးတိုက်ပွဲအဖြစ် ရည်ညွှန်းသည်။ အရေခြုံမှု အမျိုးမျိုးကို နှစ်သက်သူ။ ဘုရားသခင်နှင့် ကိုယ်တော်၏နှုတ်ကပါဌ်တော်ကို မရိုသေသူများ။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်လည်း “ဂေါဂနှင့် မာဂေါဂ” ဟုဖော်ပြထားသည်။
“ဂေါဂနှင့် မာဂေါဂ” ၏ သမ္မာကျမ်းစာနိုင်ငံကား မည်သူနည်း။
“ဂေါဂနှင့် မာဂေါဂ” သည် ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်၏ အမှန်တရားကို တွန်းလှန်ရန်နှင့် ဘုရားသခင်၏လူစစ်များကို တွန်းလှန်ညှဉ်းပန်းရန် အတူတကွ ပူးပေါင်းကြံစည်မည့်သူတိုင်းကို အမြဲကိုယ်စားပြုသည်။ ဤသည်မှာ သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် မတူညီသောအကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဝိညာဉ်ရေးတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
အရှင်ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ငါ၏ကျွန်ဣသရေလပရောဖက်တို့ သည် ရှေးကာလ၌ ငါပြောဘူးသော၊ အရှင်ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဂေါဂသည် ဣသရေလပြည်သို့ ရောက်သောအခါ၊ ငါ့ဒေါသသည် ငါ့မျက်မှောက်၌ ပေါ်လာလိမ့်မည်။ အကယ်စင်စစ် ထိုကာလ၌ ဣသရေလပြည်၌ ကြီးစွာသော တုန်လှုပ်ခြင်းရှိလိမ့်မည်။ ပင်လယ်ငါးများ၊ ကောင်းကင်ငှက်များ၊ တောသားရဲများ၊ မြေကြီးပေါ်၌ တွားတတ်သော တိရစ္ဆာန်များနှင့် မြေကြီးပေါ်မှာရှိသော သူအပေါင်းတို့သည် ငါ့ရှေ့မှာ တုန်လှုပ်ကြလိမ့်မည်။ တောင်တို့သည် ပြိုလဲ၍၊ မတ်စောက်သော အရပ်တို့သည် လဲကြလိမ့်မည်။ အရှင်ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ငါ့တောင်အရပ်ရပ်တို့၌ ထိုသူကို ထားကို ငါ့တောင်တပြင်လုံး၌ ငါခေါ်၍၊ လူတိုင်း၏ဓားသည် မိမိညီအစ်ကိုကို တိုက်ရမည်ဟု အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။ ~ ယေဇကျေလ ၃၈:၁၇-၂၁
ယနေ့ဝိညာဉ်ရေးဣသရေလလူအပေါင်းတို့သည်ယေရှုခရစ်၌ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ ယနေ့ ခရစ်ယာန်စစ်များသည် ဝိညာဉ်ရေးဂျူးများဖြစ်သည်။
“အကြောင်းမူကား၊ သူသည် ယုဒလူမဟုတ်၊ အရေဖျားလှီးခြင်းသည် ဇာတိပကတိအတိုင်းမဟုတ်၊ အတွင်း၌ရှိသော ယုဒလူဖြစ်၏။ အရေဖျားလှီးခြင်းသည် စိတ်နှလုံးနှင့်ဆိုင်သော၊ အကြင်သူ၏ဂုဏ်ကျေးဇူးသည် လူတို့မဟုတ်၊ ~ ရောမ ၂:၂၈-၂၉
ထို့ကြောင့် အတိတ်ကာလကဲ့သို့ပင် ယနေ့တွင် ဘုရားသခင်သည် သူ၏မျက်မှောက်တော်တွင် လူသားတည်ဆောက်ခဲ့သော ဝိညာဉ်ရေးအိမ်များအားလုံးကို (လူသားတို့၏ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု) ကို လှုပ်ခါစေမည်ဟု ကတိပြုထားသည်။
“ပြောသောသူကို မငြင်းကြနှင့်။ အကြောင်းမူကား၊ မြေကြီးပေါ်မှာ ပြောသောသူကို ငြင်းပယ်သောသူသည် မလွတ်လျှင်၊ ကောင်းကင်ဘုံက မိန့်တော်မူသောသူကို ငါတို့သည် ရှောင်လျှင် သာ၍မလွတ်ဘဲ၊ အဘယ်သူ၏အသံသည် မြေကြီးကို လှုပ်စေသနည်းဟူမူကား၊ ယခုမူကား၊ ငါသည် နောက်တဖန် ကတိပြုတော်မူပြီ။ မြေကြီးသာမက ကောင်းကင်ကိုလည်း လှုပ်စေ၏။ နောက်တဖန် ဤစကားသည် တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိသော အရာတို့ကို ဖန်ဆင်းသကဲ့သို့ တုန်လှုပ်ခြင်းသို့ ရောက်သော အရာတို့ကို ဖယ်ရှားခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် မတုန်မလှုပ်နိုင်သောနိုင်ငံကို ခံယူကာ ဘုရားသခင်ကို ရိုသေလေးစားမှုဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ရိုသေစွာ ဝတ်ပြုခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးတော်ရှိကြပါစို့။” ~ ဟေဗြဲ ၁၂:၂၅-၂၉
ဤအရာက ကျွန်ုပ်တို့အား ဖော်ပြသည်– “ခရစ်တော်ယေရှု၌ရှိသော ကောင်းကင်ဘုံ” (ဧဖက် ၁:၃ နှင့် ၂:၆ ကိုကြည့်ပါ၊ ဝတ်ပြုရန်အတွက် စုရုံးနေသောအသင်းတော်အား ကိုယ်စားပြုသည်) ကိုပင် ဝိညာဉ်ရေးအရတုန်လှုပ်စေလိမ့်မည်။ တခါတရံမှာ ဘုရားကျောင်းထဲက ဘယ်သူတွေ တုန်လှုပ်သွားလဲဆိုတာကို အံ့သြမိပါတယ် ။
ထို့ကြောင့် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့် ဗျာဒိတ် ၂၀ တွင် ဖော်ပြထားသော ဝိညာဉ်ရေးတိုက်ပွဲ “ဂေါဂနှင့် မာဂေါဂ” နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော ဤဝိညာဉ်ရေးတိုက်ပွဲသည် ယနေ့အထိ ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဘုရားသခင်တွင် “ခရစ်ယာန်ဘာသာ” ဟုခေါ်သည့် အတုအယောင် သွန်သင်ချက်အတုများကို ဆန့်ကျင်ဟောပြောသည့် ဓမ္မအမှုတစ်ခု ရှိပါသေးသည်။
ထို့​ကြောင့် ယေ​ဇ​ကျေ​လ​၌ ဂေါ​ဂ​နှင့်​မာ​ဂေါ​ဂ​တို့​ကို အ​ပြစ်​တင်​သော​အ​မှု​ကို​လည်း​ကောင်း ပေါ်​လွင်​စေ​၏။
ကာလနာ၊ အသွေးနှင့် သူ့ကို ငါတောင်းပန်မည်။ သူနှင့်သူ၏တပ်သားတို့အပေါ်၌၎င်း၊ သူ၌ပါသောလူအများအပေါ်မှာ၎င်း၊ လျှံသောမိုး၊ ကြီးစွာသော မိုဃ်းသီးများ၊ မီးခဲများ၊ ထိုသို့ ငါသည် ကိုယ်ကို ချီးမြှောက်၍ သန့်ရှင်းစေမည်။ ငါသည် များစွာသောလူမျိုးတို့ရှေ့မှာ ငါထင်ရှား၍၊ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို သူတို့သိရလိမ့်မည်။” ~ ယေဇကျေလ ၃၈:၂၂-၂၃
“သင်နှင့် သင်၏တပ်သားအပေါင်းတို့၊ သင်၌ပါသော လူများနှင့်တကွ၊ ဣသရေလတောင်တို့အပေါ်သို့ လဲ၍ ကိုက်စားရသော ငှက်မျိုး၊ တောသားရဲတို့အား ငါပေးမည်။ လွင်ပြင်၌ သင်သည် လဲလိမ့်မည်။ ငါပြောပြီဟု အရှင်ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။ မာဂေါဂနှင့် ကျွန်းစုတို့၌ မထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့တွင် မီးကို ငါလွှတ်လိုက်၍၊ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို သူတို့သိရကြလိမ့်မည်။ ငါ၏လူဣသရေလအမျိုးအလယ်၌ ငါ့နာမကို သန့်ရှင်းစေမည်။ ငါ၏နာမမြတ်ကို နောက်တဖန်မညစ်ညူးစေဘဲ၊ ငါသည် ဣသရေလအမျိုး၌ သန့်ရှင်းသော ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို တပါးအမျိုးသားတို့သည် သိကြလိမ့်မည်။” ~ ယေဇကျေလ ၃၉:၄-၇
ဂေါဂနှင့် မာဂေါဂဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော ယေဇကျေလ၏ ပရောဖက်ပြုချက်ဘာသာစကားသည် ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၉၊ အခန်းငယ် ၁၇ မှ ၂၁ တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း တူညီသည်။ လူတို့သည် အရေခြုံမှုကို မိတ်သဟာယဖွဲ့လိုကြပြီး စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များကို နှိမ့်ချလိုသောအခါ၊ ဘုရားသခင်သည် ထိုသူတော်ကောင်းများကို လှည့်ဖြားရန် ယဇ်ပူဇော်မည်ဖြစ်သည်။. ဤ​နောက်​ကျမ်းပိုဒ်​ကို​ဖတ်​စဉ်​တွင်​ ဤ​အ​ရာ​ကို​စဉ်း​စား​ပါ။
“အချင်းလူသား၊ အရှင်ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ အမွေးရှိသော ငှက်အပေါင်းတို့နှင့် တော၌နေသော တိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့အား ဟောပြော၍ စည်းဝေး၍ လာကြလော့။ အမဲသားကိုစား၍ အသွေးကိုသောက်ခြင်းငှာ၊ ဣသရေလတောင်တို့အပေါ်၌ ကြီးစွာသောယဇ်ကို ပူဇော်သော ငါ၏ယဇ်ဘို့ အရပ်ရပ်တို့၌ စုဝေးကြလော့။ ခွန်အားကြီးသောသူ၏အသားကိုစား၍ မြေကြီး၏မှူးမတ်တို့၏အသွေး၊ သိုးထီး၊ သိုးသငယ်၊ ဆိတ်သငယ်၊ နွားထီး၊ မပြည့်မှီတိုင်အောင် ဆီဥကိုစားရကြမည်။ ယစ်မူးသည်တိုင်အောင် အသွေးကို သောက်ရကြမည်။ ထိုသို့ မြင်းစီးရထားများ၊ အားကြီးသော သူရဲ၊ စစ်သူရဲအပေါင်းတို့နှင့် ငါ့စားပွဲ၌ သင်တို့သည် ပြည့်ကြလိမ့်မည်ဟု အရှင်ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။ ငါသည် တပါးအမျိုးသားတို့တွင် ငါ့ဘုန်းကို ထင်ရှားစေ၍၊ ငါစီရင်သော ငါစီရင်ချက်နှင့် သူတို့အပေါ်၌ ငါတင်ထားသော ငါ့လက်ကို တပါးအမျိုးသား အပေါင်းတို့သည် မြင်ကြလိမ့်မည်။ ငါသည် သူတို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို ထိုနေ့မှစ၍ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် သိကြလိမ့်မည်။” ~ ယေဇကျေလ ၃၉:၁၇-၂၂
ထို့ကြောင့်၊ ဤဘာသာတရားအတုအယောင်၏ အရေခြုံမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ဤဝိညာဏတရားဟောခြင်း၏ နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ကို ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး 20 တွင် ဝိညာဉ်ရေးသွန်းလောင်းထားကြောင်း ပြသထားသည်။
“ထိုသူတို့သည် မြေကြီး၏အနံပေါ်သို့တက်၍ သန့်ရှင်းသူတို့၏တပ်ကို၎င်း၊ ချစ်သောမြို့ကို၎င်း လှည့်ပတ်သဖြင့်၊ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်ကမီးကျ၍ လောင်လေ၏။ ~ ဗျာဒိတ် ၂၀:၉
စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များအပေါ် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းခံရတိုင်း၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းသည့်အဖွဲ့အစည်း (အစိုးရ၊ ကက်သလစ်၊ ပရိုတက်စတင့်၊ မွတ်စ်လင်မ် သို့မဟုတ် အခြားအယူမှားဘာသာတရားတစ်ခုခု) နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းသည့်အဖွဲ့အစည်းသည် ဝိညာဉ်ရေးတိုက်ပွဲတွင် ရှုံးသည်။ သူတို့သည် ခရစ်ယာန်များစွာကို သတ်ဖြတ်ရာတွင် အောင်မြင်နိုင်သော်လည်း (ခရစ်တော်ကို သတ်ပုံကဲ့သို့) ခရစ်ယာန်များသည် ဝိညာဉ်ရေးတိုက်ပွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့သည်။ ခရစ်ယာန်များသည် ကောင်းကင်ဘုံသို့သွား၍ ဆန့်ကျင်ဘက်ဘာသာဝင်များ ပျောက်ဆုံးကာ ငရဲသို့သွားကြသည်။
ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး 20 ၏နောက်ဆုံးကျမ်းချက်များသည် ဤနောက်ဆုံးတရားစီရင်ခြင်းနေ့ကိုပြသခြင်းဖြင့် ပြီးဆုံးသင့်သည်။
“သူတို့ကို လှည့်ဖြားသော မာရ်နတ်သည် သားရဲနှင့် ပရောဖက်အတုအယောင်ရှိရာ ကန့်နှင့် မီးအိုင်ထဲသို့ ချခြင်းခံရပြီး နေ့ညမပြတ် ညှဉ်းဆဲခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ ဖြူသောပလ္လင်ကြီးကို၎င်း၊ ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာ ထိုင်တော်မူသောသူကို၎င်း ငါမြင်၏။ သူတို့အတွက် နေရာရှာမတွေ့။ သေလွန်သောသူအကြီးအငယ်တို့သည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ရပ်နေသည်ကို ငါမြင်၏။ စာစောင်များကိုဖွင့်၍ အသက်စာစောင်တည်းဟူသော အခြားသောစာအုပ်ကိုဖွင့်၍ သေလွန်သောသူတို့သည် မိမိတို့အကျင့်အတိုင်း၊ စာအုပ်၌ရေးထားသမျှတို့ကို စစ်ကြောစီရင်ခြင်းကို ခံကြရသည်။ ~ ဗျာဒိတ် ၂၀:၁၀-၁၂
ဤနောက်ဆုံးတရားစီရင်သည့်နေ့တွင် ယေရှုခရစ်ကို ရင်ဆိုင်ခြင်းမှ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ လွတ်မြောက်မည်မဟုတ်ပေ။
“ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​မိန့်​တော်​မူ​သော​အ​ကြောင်း​မူ​ကား၊ ငါ​အသက်​ရှင်​သည်​အ​တိုင်း ဒူး​ထောက်​၍​ဘု​ရား​သ​ခင်​အား​ဝန်​ခံ​ရ​လိမ့်​မည်။ သို့​ဖြစ်​၍​ငါ​တို့​အ​တိုင်း​သည် ကိုယ်​တော်​၏​အ​ကြောင်း​အ​ရာ​ကို​ဘု​ရား​သ​ခင်​ထံ​သို့​တင်​ပြ​ရ​မည်။” ~ ရောမ ၁၄:၁၁-၁၂
“ယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့် ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောအရာများ၊ မြေကြီးပေါ်၌ရှိသော အရာများ၊ ယေရှုခရစ်သည် သခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၊ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းအသရေတော်ကို ထောက်၍၊ ~ ဖိလိပ္ပိ ၂:၁၀-၁၁
“အသက်စာစောင်” နှင့် “စာအုပ်များ” သည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏ တရားစီရင်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် သင့်အား အပြစ်မှကယ်တင်သောအခါ၌ သင်၏နာမကို ရေးမှတ်ထားသော အသက်စာစောင်ဖြစ်သည်။ သင်၏နာမသည် အသက်စာစောင်၌ မပါသောကြောင့်၊
“မြေကြီးပေါ်၌နေသောသူအပေါင်းတို့သည် ဤလောကတည်ချိန်မှစ၍ အသေသတ်သောသိုးသငယ်၏အသက်စာစောင်၌ နာမည်မရေးထားသော (သားရဲ) ကို ကိုးကွယ်ကြလိမ့်မည်။” ~ ဗျာဒိတ် ၁၃:၈
ကျွန်ုပ်တို့စီရင်ဆုံးဖြတ်မည့် “စာအုပ်များ” သည် သမ္မာကျမ်းစာ၏စာအုပ်များဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် ၎င်းတို့အနက်မှ ၆၆ ခုရှိသည်။ စာဖတ်ဖို့၊ စာကျက်ဖို့ အချိန်ပေးပြီး သူတို့အနားမှာ နေထိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို သမ္မာကျမ်းစာ၏ “စာအုပ်များ” ဖြင့် အကဲဖြတ်ပါမည်။ ဤနေရာ သို့မဟုတ် ထိုနေရာ၌ ကျမ်းဂန်တစ်ခုမျှသာမက ဤစာအုပ် ၆၆ အုပ်ပါ စကားလုံးတိုင်းကို ခြုံငုံမိပါသည်။
ပင်လယ်ရေသည် ထိုနေရာ၌ရှိသော လူသေတို့ကို စွန့်တော်မူ၏။ သေခြင်းနှင့် ငရဲပြည်သည် သူတို့၌ရှိသော လူသေတို့ကို ကယ်နှုတ်၍၊ လူတိုင်း မိမိတို့အကျင့်အတိုင်း တရားစီရင်ခြင်းကို ခံရကြ၏။ သေခြင်းနှင့် ငရဲကို မီးအိုင်ထဲသို့ ချပစ်ခဲ့သည်။ ဤကား ဒုတိယသေခြင်းပေတည်း။ အသက်စာစောင်၌ ရေးထားသည်ကို မတွေ့သောသူမည်သည်ကား မီးအိုင်ထဲသို့ ချပစ်ခြင်းခံရ၏။” ဗျာဒိတ် ၂၀:၁၃-၁၅
ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး (ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး 20) တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဧဝံဂေလိတရားနေ့တစ်ခုလုံး (ယေရှုခရစ်၏ပထမကြွလာချိန်မှ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံး၏အဆုံးတိုင်အောင်)—အားလုံးအား “ခရစ်ယာန်ဘာသာအတုအယောင်များကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် ရှင်းလင်းထားသည်။ "သမိုင်းမှတ်တမ်းထဲက။ အတုအယောင် "ခရစ်ယာန်ဘာသာ" လှည့်စားမှုများကို သင့်နှလုံးသားနှင့် အသက်တာမှ ဖယ်ရှားခဲ့ပါသလား။ ဒုတိယသေခြင်းတရားသည် သင့်အပေါ်၌ တန်ခိုးအာဏာရှိလိမ့်မည်လော။ ပထမထမြောက်ခြင်းတွင် သင်ပါဝင်ခဲ့ပါသလား။ သင်သည် “... သားရဲ၏ရုပ်တုကို မကိုးကွယ်၊ နဖူး၊ လက်၌ တံဆိပ်မခံရသော၊ သင်သည် ဘုရားသခင်၏လူစစ်များထဲမှ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလား။” သင့်ဘ၀တွင် အပြစ်တရားအပေါ် အောင်ပွဲခံပြီး “ခရစ်ယာန်ဘာသာ” အတုအယောင်၏ မိတ်သဟာယဖွဲ့မှုအပေါ် အောင်နိုင်ပါသလား။
မှတ်ချက်- ဤအခန်းကြီး နှစ်ဆယ်သည် ဗျာဒိတ်ကျမ်းစာအပြည့်အစုံတွင် မည်သည့်နေရာတွင် ရှိနေသည်ကို ဖော်ပြသည်။ အခန်း 20 ပါ တရားစီရင်ချက်သတင်းစကားများသည် လူတို့၏အသက်တာတွင် စာတန်၏တန်ခိုးကိုဖျက်ဆီးရန် ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြီးမြောက်စေခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်သည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ မြင့်မားသောအဆင့်အမြင်ကို ကောင်းစွာနားလည်ရန်၊ ““လမ်းပြမြေပုံဗျာ”
အမျိုးအစားများ ဗျာ _၂၀, ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီး, သစ္စာနှင့် သစ္စာ, နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းသူ တဂ် တိုက်ပွဲ, သမိုင်း, တရားစီရင်ခြင်း။, အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးမှု, ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း, စာတန် ပို့စ်ညွှန်း